မဒေါင်းလုပ် Security မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Security မဆော့ဝဲ
McAfee Rootkit Remover သည်အသုံးပြုသူများအားသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပုံမှန်နည်းလမ်းများဖြင့်ထောက်လှမ်း။ မရနိုင်သောဆိုးဝါးသော software များဖြစ်သော rootkits များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဖျက်ရန်ကူညီသောအောင်မြင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Rootkits များသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖုံးကွယ်နိုင်သောကြောင့်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသော malware များဖြစ်သည်။...
Tor Browser ဆိုတာဘာလဲ။ Tor Browser ဆိုသည်မှာအင်တာနက်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုဂရုစိုက်ရန်၊ အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာအမည်ဝှက်စွာရှာဖွေရန်နှင့်အင်တာနက်လောကရှိအတားအဆီးအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သွားလာရန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်တီထွင်ထားသောယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
Bitdefender Antivirus Free သည်သင်၏ကွန်ပျူတာများတွင်အခမဲ့သုံးနိုင်သောအထိရောက်ဆုံး antivirus program တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်သည်သင်တို့အတွက်အကာအကွယ်အမျိုးမျိုးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီးရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ system tray...
Norton AntiVirus သည်ကွန်ပျူတာနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ စပိုင်ဝဲများမှကာကွယ်ရန်အဆင့်မြင့်ကာကွယ်မှုပေးသောအထူးလုံခြုံရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအပြည့်အ ၀ ကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏စနစ်နှင့်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအန္တရာယ်ရှိသည့်ဆော့ဝဲလ်များကိုကာကွယ်လိုပါက၎င်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအကာအကွယ်ပေးသည့် Norton AntiVirus...
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) သည် Windows PC အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့နှင့်မြန်ဆန်သောဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ Kaspersky အခမဲ့ Antivirus 2020 သည်အခမဲ့ antivirus ပရိုဂရမ်များအနက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်သည်။ Kaspersky Free Antivirus ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Kaspersky Security Cloud Free သည် Window...
Avast Free Antivirus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များနှင့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သောကွန်ပျူတာများအတွက်အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှုစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် virtual ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဆန့်ကျင်။ တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ အင်တာနက်ကိုသုံးသောကွန်ပျူတာတိုင်းသည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၊ မည်သည့်ကွန်ယက်နှင့်...
AVG AntiVirus Free သည်နေရာအသစ်ယူပြီးယခင်ဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော scan ဖတ်မှုနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သော scan ဖတ်ခြင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲသည် interface ဒီဇိုင်းတွင်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ 2020 version နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ...
Protect My Disk သည်သင်၏ USB stick များနှင့်ကွန်ပျူတာများကို Autorun virus များမှကာကွယ်ပေးသောအခမဲ့လုံခြုံရေး software တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာကို antivirus program တစ်ခုနှင့်ကာကွယ်လျှင်ပင် USB မှတ်ဉာဏ်ကိုအခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးသို့ပလပ်ထိုးလိုက်လျှင်ပြဿနာများကြုံရနိုင်သည်။ ဤပြသနာကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ဤပြသနာကိုလုံးဝရှောင်ရှားရန်...
Windows Firewall Control သည် Windows Firewall ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့ပေးသော Windows Firewall ၏အသုံးများဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည်။ program သည် system tray တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး firewall setting များကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူများအားအချိန်ဖြုန်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Windows Firewall Control...
အကယ်၍ သင်သည် Apple ID စကားဝှက်ကိုအက်ကွဲရန်သို့မဟုတ် iPhone Screen Lock Password ကိုအက်ကွဲရန်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် iMyFone LockWiper ကိုအတိအကျပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဝယ်ယူရန်ဤလိပ်စာသို့သွားပါ။ သင့် iPhone ၏မျက်နှာပြင်သော့ခတ်ထားသောစကားဝှက်ကိုမေ့ခြင်းသို့မဟုတ် Apple ID သည်အသုံးအများဆုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊...
Virus, Worm, Spyware နှင့် Malware ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများကိုခြိမ်းခြောက်သော software များစွာသည် data ဆုံးရှုံးမှု၊ ရုပ်ပစ္စည်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုများကဲ့သို့သောကြီးလေးသောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးတစ်ခုသာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် antivirus program...
Emsisoft Anti-Malware သည်သင့်အားအန္တရာယ်ရှိသည့် software များမှသင့်ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သော program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေတာဘေ့စ်ကိုအဆက်မပြတ်မွမ်းမံခြင်းဆိုသည်မှာ၎င်းသည် malware အသစ်ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသိရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ Emsisoft Anti-Malware ကြောင့်၊ နောက်ခံတွင်ရှိနေသော antivirus software နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့် software...
ComboFix သည်သင်၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်အလုပ်မလုပ်သောအခါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုသန့်ရှင်းနိုင်သည် ComboFix သည်အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြစ်ပြီးသင့်ကွန်ပျူတာအားဗိုင်းရပ်စ်များ၊ trojans, rootkits, adware, spyware, malware နှင့်...
Malware Hunter ဆိုသည်မှာသင့်အားဗိုင်းရပ်စ်များမှကာကွယ်ရန်ကူညီသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည် Malware Hunter သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကို malware နှင့်ခေါင်းမာသောဗိုင်းရပ်စ်များမှကာကွယ်ရန်အလိုရှိပါကသင်သုံးနိုင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဖယ်ရှားနည်း \_ t Malware Hunter...
၀ င်းဒိုးအတွက်ရိုးရှင်းသော်လည်းအသုံး ၀ င်သည့်ကိရိယာများဖြင့်ဂရုပြုရန် Carifred သည်အလားတူအလုပ်မျိုးကိုပြုလုပ်ပြီး Ultra Adware Killer ဟုခေါ်သော application ဖြင့်ကွန်ပျူတာများကိုကူညီသည်။ ဒီ application ကသင့်ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ပေးသောသင်၏ Adware software ကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီသည်။ အကယ်၍ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခြားအကောင့်များရှိပါက၊...
AdwCleaner သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအားအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နေသောအန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဝဲလ်များမှအကာအကွယ်ပေးသောအစွမ်းထက်။ အဆင့်မြင့်သောလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကွန်ပျူတာများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးမပြုပါက၊ AdwCleaner ၏အကူအညီဖြင့်အချိန်နှင့်အမျှရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်မည်သည့် malware...
360 Total Security သည် antivirus ဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများကိုဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူကွန်ပျူတာအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်အမှိုက်ပုံးများသန့်ရှင်းခြင်းကဲ့သို့သောအသုံးဝင်သောအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်။ 360 Total Security ၏အဆင့်မြင့်သော Version ကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်သင်ရယူနိုင်သည်။ 360...
Keylogger အမျိုးအစားပရိုဂရမ်များကိုထောက်လှမ်းရန် application သည်သင်ကီးဘုတ်နှင့်ထည့်ထားသောအချက်အလက်များသိုလှောင်ရန်နှင့်အခြားသူများအားဝေမျှစေသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ keylogger အမျိုးအစားပရိုဂရမ်များဖြင့်သင်၏ဘဏ်စကားဝှက်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့်အလားတူစကားဝှက်များခိုးယူခံရနိုင်သည်။ အများပြည်သူဖွင့်နိုင်သောအင်တာနက်ကဖေးများတွင်ဤအလားအလာသည်...
Security Task Manager သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များ (အပလီကေးရှင်းများ၊ DLL များ၊ BHO များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ) အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေးရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောလုံခြုံရေးမန်နေဂျာဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက် Windows Task Manager ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးလုံခြုံရေးအန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ပြချက်၊...
AVG Web TuneUp အပလီကေးရှင်းသည်အင်တာနက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုပိုမိုလုံခြုံစေရန်နှင့်သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးကိုအလေးထားနိုင်သော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဆိုက်များသို့သင် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုမီအင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ရောက်လာနိုင်သောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသော browser...
Kaspersky Anti-Virus 2017 သည်ယနေ့အချိန်တွင် Windows PC အသုံးပြုသူများအတွက်အွန်လိုင်းဗိုင်းရပ်စ်ခြိမ်းခြောက်မှုများတိုးပွားလာသောအကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ယက်များ၊ ဘဏ်များ၊ စျေးဝယ်ခြင်းများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းများပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ပင် ၄ င်းသည်စနစ်အားအမြဲတမ်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ Kaspersky Anti-Virus...
Windows 10 Firewall Control သည်သင်၏ desktop ကွန်ပျူတာများတွင်သုံးနိုင်သောလုံခြုံရေးဆော့ဝဲတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ မင်းရဲ့အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာနေနိုင်အောင်ကူညီပေးတဲ့ဒီအစွမ်းထက် tool နဲ့မင်းအချက်အလက်တွေကိုလုံခြုံအောင်သိမ်းထားတယ်။ Windows 10 Firewall Control သည်ရိုးရှင်းပြီးပြည့်စုံသော tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ network...
Trend Micro ၏ Lock Screen Ransomware Tool ကို သုံး၍ သင်၏ system သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသော ransomware ကိုသန့်ရှင်းနိုင်ပါသည်။ Ransomware သည်သင့် system (သို့) ဖိုင်များအား ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသော malicious software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆိုးဝါးသောဆော့ဝဲများသည်သင်ဝင်ကြည့်သောဆိုဒ်များ၊...
Kaspersky Security Cloud 2021 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့် Kaspersky ၏အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကိုရရှိသည်။ Kaspersky Security Cloud တွင်ပထမ ဦး ဆုံး adaptive security program သည် Internet Security (Internet Security), Secure Connection (VPN), Password Manager (Password Manager), Security Live (Live Security), My Apps (My Apps)...
Avast Premium Security သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်အပြည့်စုံဆုံးကာကွယ်မှုပေးနိုင်သောအဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရုံသာမက Avast Premium Security သည်သင်၏ desktop နှင့် mobile device အားလုံးအတွက်အွန်လိုင်းကာကွယ်မှုကိုအပြည့်အဝပေးသည်။ သင်မည်သည့်စက်ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ Windows PC၊ Mac ကွန်ပျူတာ၊...
GridinSoft Anti-Malware သည်သင်၏ကွန်ပျူတာအားမကောင်းသောဆော့ဝဲများဖြင့်တိုက်ခိုက်လျှင်သင်သုံးနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ကိုလှိုင်းစီးနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကွဲပြားသောလင့်ခ်များကိုကလစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာငါတို့သူငယ်ချင်းတွေ (သို့) အခြားသူတွေကငါတို့ကွန်ပျူတာထဲ ၀...
အင်တာနက်ပြန့်နှံ့လာသည်နှင့်အမျှမိဘများသည်သူတို့ကလေးများကွန်ပျူတာ သုံး၍ အချိန်ဖြုန်းသည့်နေရာများသို့စိတ် ၀ င်စားသောကိစ္စဖြစ်လာသည်။ အင်တာနက်တွင်အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများရှိသော်လည်းအန္တရာယ်ရှိသောအကြောင်းအရာများရှိနေခြင်းသည်ဤအချိန်၌မိဘများအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။...
malware နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော Dev Secure သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်ပေးသော USB၊ CD နှင့်ကဒ်အပေါက်ကဲ့သို့ပြင်ပကိရိယာများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Autorun, Musallat နှင့် Ceko ကဲ့သို့သော exe၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပိုးကောင်များအားရှာဖွေခြင်းဖြင့်အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးသည်။ Dev Secure ပေါ်လွင်ချက်များ ...
PrivaZer သည်သင်၏ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးပြီး malware များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်၎င်း၏မြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည် application အမျိုးမျိုးကိုစကင်ဖတ်နိုင်ပြီးသင်၏အင်တာနက်ကြည့်ရှုသည့်ဒေတာများကိုရှင်းလင်းစေပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာမှအင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ထားခဲ့သည့်ခြေရာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သော program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...
Wipe ဟာအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပြီး၊ သင့်ရဲ့ hard drive ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့ဖိုင်များကိုပယ်ဖျက်ပြီးရင်သင်အပိုသိုလှောင်မှုနေရာဖန်တီးနိုင်သည်။ user-friendly interface ပါ ၀ င်သော program တစ်ခုကိုသင် run သောအခါ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် install လုပ်ပြီးနောက် program သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိမလိုအပ်သောဖိုင်များကိုအလိုအလျောက်...
Sisma သည်သင်၏ desktop ကွန်ပျူတာများတွင်သုံးနိုင်သောအစွမ်းထက်စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Sisma ဖြင့်သင်၏စကားဝှက်အားလုံးကိုအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးခိုင်မာသောစကားဝှက်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သော Sisma သည်ခိုင်မာသော 256-bit encryption စံနှုန်းများနှင့်လုံခြုံသော database ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသော...